समय : जीवनमा भोलि कहिल्यै आउँदैन | Jwala Sandesh
समय : जीवनमा भोलि कहिल्यै आउँदैन
| प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र २०, २०७५ ::: 106 पटक पढिएको |
समयबारे धेरैले धेरै कुरा भनेका छन्, त्यसमध्ये दार्शनिक प्लेटोको भनाइ छ, ‘टाइम इज मुभिङ इमेज अफ रियालिटी अर्थात् समय वास्तविकताको चलायमान चित्र हो ।’ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विचारमा समय भ्रम हो । उनले भविष्य भन्ने कहिल्यै आउँदैन पनि भनेका छन् । त्यसो त धेरैजसो भनाइ परिस्थितिजन्य हुन्छन् । ‘लाइफ इज ब्युटिफुल’ भन्ने भनाइ पपकर्नका साथमा सिनेमा हेरिरहेका युवायुवतीलाई त लागू होला, तर जिन्दगीमा ठूलो आँधी चलेको महसुस गरिरहेको मानिसलाई लागू हुँदैन । तर, समयबारे आइन्स्टाइनले भनेको भविष्य कहिल्यै आउँदैन भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ ।
यही कहिल्यै नआउने कुराको नाममा मानिसहरू तँछाडमँछाड गरिरहेका छन् । भविष्यमा यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने भनेर सोच्दासोच्दै सहज वर्तमान बाँच्नै नपाई मानिसको समय बितिरहेको हुन्छ । वर्षौंदेखि भविष्यका लागि देखेको सपना पूरा भए पनि नभए पनि वर्तमानमै समय सकिन्छ । जब कुनै मानिसको मृत्यु हुन्छ अनि हामी भन्छौँ– यति नै समय लिएर आएको रहेछ या उसको समय सकियो । आएको पनि समय, गएको पनि समय । आउँदै छ जस्तो लाग्ने पनि समय, जाँदै छ जस्तो लाग्ने पनि समय । जन्मिँदाको पनि समय, मर्दाको पनि समय । यही समय हो जहाँ हामी जन्मन्छौँ, यही समय हो जहाँ हामी हुर्किन्छौँ र आफ्नो जीवनका विविध पाटा बिताउँछौँ, यही समय हो हामी मर्छौं । अनि यही समय हो हामी बाँचिरहेका छौँ ।
यही समय हो जहाँ हामी जन्मन्छौँ, यही समय हो जहाँ हामी हुर्किन्छौँ र आफ्नो जीवनका विविध पाटा बिताउँछौँ, यही समय हो हामी मर्छौं । अनि यही समय हो हामी बाँचिरहेका छौँ ।
समयलाई संस्कृतमा ‘काल’ भनिन्छ । कालको अर्थ अँध्यारो र मृत्यु पनि हो । कसैको मृत्युपछि हामी कालले लग्यो या कालगतिले मऱ्यो पनि भन्ने गर्छौं । कालगतिको अर्थ समयको गति हो । काल तीन प्रकारका हुन्छन् भनेर त हामीले सानो छँदै पढेको हो, भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्य काल । समयलाई विभाजित गर्ने क्रममा विगत, वर्तमान र भविष्य भनिएको हो । समयबारे बुझ्न ब्रह्माण्डलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा एउटै जुनीमा गर्न कठिन छ, कोसिससम्म गर्ने हो । समयको विभाजनलाई बुझ्न ‘अहिले कति बज्यो’ भन्ने कुरा धेरै सतही हुन्छ, तर वर्तमानलाई व्यवस्थापन गर्न घडीले सहयोग भने गरेको छ । केलाई कति समय भन्ने, कहिलेदेखि गणना गर्ने ? युग, शताब्दी, वर्ष, महिना, हप्ता, दिन, रात, साँझ, बिहान, घन्टा, मिनेट, सकेन्ड कसरी हेर्ने ?
पूर्वीय दर्शनले समयलाई चार युगमा विभाजित गरेको छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग । सत्ययुग १७ लाख २८ हजार वर्षको थियो भन्ने छ । त्रेतायुग १२ लाख ९६ हजार, द्वापरयुग ८ लाख ६४ हजार र कलियुग ४ लाख ३२ हजार वर्षको । श्रीमद् भागवत गीता समयको कुरा उल्लेख भएको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट दस्ताबेज मानिन्छ । जसमा समयलाई विभिन्न पक्षबाट विलेषण गरिएको छ । संभवामी युगे युगे भनेर कृष्णले हरेक युगमा म हुन्छु भनेका छन् । गीतामा कृष्णले म नै सर्वोपरी हुँ भनेको कुरालाई लिएर कतिपय आलोचकहरूले हिन्दूधर्मका देवताले आफूबाहेक अरू कोही छैन भन्छन्, धर्ममा मपाईं मात्रै हुन्छ ? भनेर आलोचना गरेको पनि पाइन्छ, तर कृष्णको ‘म’को अर्थ मपाईं नभई समय हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदा यदा ही धर्मस्यदेखि संभवामी युगे युगेसम्मको श्लोकले जबजब अन्याय हुन्छ त्यहाँ म हुन्छु भनेको छ । हुन पनि हाम्रै देशमा पनि अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तन भएका छन् तिनलाई यदा यदा ही धर्मस्यसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, मिल्छ ।
यो संसार जति बुझ्यो त्यति अनौठो छ । यावत् कुरालाई थाँती राखेर समयलाई मात्रै हेर्दा दिन–रातको विभाजन किन र कसरी भयो होला ? भनेर अचम्म लाग्छ । यस्ता कुरा जति बुझ्न खोज्यो झन् रहस्यमयी लाग्छन् । बुझ्नै नखोजी अघि बढ्दा पनि जिन्दगी एक दिन सकिन्छ नै जसरी हामीले फेरिरहेको सास अक्सिजन हो भनेर थाहै नपाई कतिले यो संसार छोडेर गए कुनै हिसाबकिताब छैन । ब्रह्माण्ड, शरीर र समयबीच ठूलो तालमेल छ । ६० मिनेटको एक घन्टा हुन्छ, हाम्रो मुटुको धड्कन पनि एक मिनेटमा ६० पटक धड्किन्छ भन्ने छ ।
हामीले चाहेर पनि सबै आज एकनास हुँदैनन् । हामीले समय बदलियो भन्ने गरे पनि समय एकनास छ, घटनाक्रम र पात्रहरू चलायमान छन् । भोलिका लागि भनेर जति ठूलो तयारी गरे पनि हाम्रो जीवनमा भोलि कहिल्यै आउँदैन ।
ब्रह्माण्डको समयको गति र मानिसको शरीरका अङ्गहरूको गतिबीचको तालमेल अनौठो छ । घाम झुल्किएर कहाँ पुग्यो बादल लागेको बेला हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, साथमा घडी नभएका बेला कति बज्यो भनेर हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ । तर, कति बेला खाना खाने, कति बेला पानी खाने, कति बेला सुत्ने, कतिबेला दिसापिसाबलगायतका कुराको समय हाम्रो शरीरले थाहा पाइरहेको हुन्छ । साथमा घडी नभएर हामीलाई अरू कुरामा फरक पर्ला, तर हाम्रो शरीरलाई फरक पर्दैन । शरीर आफैंले घडीको रूपमा सबै काम गरिरहेको हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ आफू बिहान चाँडै या नियमितभन्दा बाहिरको समयमा उठ्नु छ भने ठ्याक्क त्यही समयमा ब्युँझिइन्छ, जुन समयमा विगतमा कहिल्यै ब्युँझिने गरिएको थिएन । यसको अर्थ माइन्ड र शरीरको सम्बन्ध पनि वैज्ञानिक छ, जसबारे हामीले खासै सोचेका हुँदैनौँ । माइन्ड र शरीरको सम्बन्धबारे कहिलेकाहीँ हामीले ठान्ने बिरामीलाई लिएर पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ । आज मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनी अल्छी गऱ्यो भने शरीर पनि आलस्य हुँदै जान्छ र साँच्चिकै बिरामीझैँ भइन्छ । तर, त्यस्तै अवस्थामा होइन मलाई के भएको छ र ? यो सानोतिनो कुरा हो भनेर सोच्यो भने त्यो आफैँ हराएर जान्छ । यसको अर्थ माइन्डले निर्देशन गरेको कुरालाई शरीरले साथ दिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
ब्रह्माण्डमा औंसी पूर्णिमा, दिनरात भएझैँ मानिसको जीवनमा पनि हाँसो, खुसी, दुःखसुख, पीडा हुन्छन । हामी खुसी भए पनि समय बित्ने हो, दुःखी भए पनि बित्ने हो । फरक यत्ति हो कि दुःखका दिन र रातहरू लामा र सुखका छोटा लाग्छन् । घामको प्रकाश र न्यानोपन त उही हो, तर आपत्विपत्का दिनमा आङमा न्यायो घाम लागेको महसुस हुँदैन ।
समय बलवान् छ, कृष्णदेखि प्लेटो, आइन्स्टाइन हुँदै आफ्नै बुबाआमासम्मले भनेको कुरा यही हो । भविष्य भन्ने कुरा यो जुनीमा आउँदैन, तर विगतको रिफ्लेक्सन नै वर्तमान हुने हुँदा वर्तमान राम्रो बनाइरहन सधैँ राम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रोको अर्थ आफू सन्तुष्ट हुने मात्र होइन अरूलाई दुःख नहोस् भन्ने पनि हो । आज राम्रो गरे भोलि राम्रो हुने हो । आज नराम्रो गरेर राम्रो भोलिको कामना गर्न मिल्दैन । जिन्दगीमा ‘आज’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, मानिसको जीवनमा आज नै विगत हो र आज नै भोलि पनि हो । वास्तविकताचाहिँ के हो भने हामीले चाहेर पनि सबै आज एकनास हुँदैनन् । हामीले समय बदलियो भन्ने गरे पनि समय एकनास छ, घटनाक्रम र पात्रहरू चलायमान छन् । भोलिका लागि भनेर जति ठूलो तयारी गरे पनि हाम्रो जीवनमा भोलि कहिल्यै आउँदैन ।